Ukudaya okungcono kwe-Textile Fibre nge-Ultrasonics - Hielscher Ultrasound Technology
Ukudayiswa kwe-ultrasonically kusizwe ukufakelwa kwezindwangu kungenisa ukungena kwamabala emaphepheni e-fiber futhi kukhuphule namandla wombala nokuqina kwemibala ngokukhulu. Ukudaya i-Ultrasonic inqubo esheshayo, engaqhutshwa ngaphansi kwezimo ezibandayo namazinga okushisa aphansi. Isakhiwo se-fiber sezinto ezifana nezindwangu nezindwangu asonakaliswa yi-sonication futhi sihlala sinjalo. I-Ultrasonication iqinisa ukwelashwa kokudaya kufinyelela imiphumela yemibala engcono nenqubo esheshayo.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Dyeing
Ukungena kokwenza udayi okuthuthukisiwe kwaba yimicu
Khulisa amandla wombala
Izimpawu zemibala ezithuthukisiwe
Inqubo yokudaya okusheshayo
Ukuthathwa kwedayi okuthuthukisiwe kanye namandla wombala
Ukugeza okuphezulu, ukugcobha, nokuqina kokujuluka
Ihambisana nezindwangu ezahlukahlukene (isib. Uvolo, usilika, polyamide njll.)
Izindleko ezisetshenziswayo eziphansi
Inqubo emnene, enobungane bemvelo, eluhlaza
Ukudaya kwe-Ultrasonic ngoboya: I-Sonication ithuthukisa amandla wombala nokungena kudayi ungene emicu ephakeme kakhulu.
I-homogenizer ye-ultrasonic UP200St
Ukudaya kwe-Ultrasonic kokuqina kombala ophakeme, ukushesha nekhwalithi
Imiphumela ye-Ultrasonic ngesikhathi sokudaya
Imvula & Ukudluliselwa Kwemisa: I-Ultrasonic cavitation nokusakazwa kwe-micro kuthuthukisa ukungena kokudaya kufakwe ku-pores ye-fiber kanye neyintambo. I-Ultrasonic cavitation isheshisa isilinganiso sokufakwa kudayi ngaphakathi kwefayibha ngokugcwalisa ungqimba lwangaphandle lwefayibha, ukuze udayi lungene kuma-fiber pores. Ngasikhathi sinye, i-sonication isheshisa ukusabela kwamakhemikhali phakathi kodayi nefayibha.
Ukuhlakazeka: I-Sonication ihlukanisa amaconsi, ama-agglomerates nama-aggregates alungiselela ukuhlakazeka okufanayo kudayi.
I-Degassing: Amagagasi e-Ultrasound adedela ama-molecule wegesi ancibilikisiwe noma afakwe ku-fiber aye ku-ketshezi ukuze igesi ikwazi ukuhambahamba, ngaleyo ndlela kusiza ukuthintana kwodayi-fiber nokungena ngaphakathi ukuze kufakwe imibala e-fiber esheshayo nephelele.
UTissera et al. (2016) kubonise ukuthi i-sonication iyakwazi ukufeza amandla ombala omuhle kwindwangu yekotoni emazingeni okushisa aphansi kakhulu njenge-30ºC, eyayicishe ibe ngu-230% ngaphezulu kwamandla wombala owenziwe ngendlela yokufudumeza ejwayelekile. I-sonication emnene ka-0.7 W / cm2 ne UP400St ngaphansi kwezimo zokushisa eziphansi cishe. I-30ºC inikeze imiphumela ethuthukisiwe kakhulu yamandla wombala kanye nokungena okujulile kodayi kwindwangu yekotini.
Ukuhlaziywa ngosayizi wedayi kuveza ukuthi i-ultrasonication deagglomerates futhi isabalalisa ama-molecule edayi we-hydrolyzed ngesikhathi sokudaya futhi kusiza udayi ukuthi ungene ngokujulile entweni. Ngesikhathi esifanayo, i-fiber surface ne-fiber morphology ihlala ingashintshiwe futhi igcwele ngokuphelele emva kwe-sonication.
Umphumela wezinga lamandla we-ultrasonic kwisithelo sombala
(Igrafu nokutadisha kukaHaddar et al. 2015)
Ukudaya kwe-Ultrasonic Yezinhlobonhlobo Ze-Fibre Nezindwangu
I-Ultrasonication iyindlela ephumelelayo, nokho emnene yokwenza udayi nezindwangu ezinemibala efana nodayi be-organic ne -organic.
Ucwaningo kanye nezifundo zokushayela zihlole indlela yokudaya ye-ultrasonic ngempumelelo ezinhlobonhlobo zefayibha nezindwangu.
I-Ultrasonication yathuthukisa inqubo yokudaya ye
(organic) ukotini & Izindwangu zikotini ezihlanganisiwe
izindwangu zokwenziwa, isib. i-nylon, i-polyester, i-polyamide
imicu yemvelo, isib. hemp, bamboo
Ukuhlaziywa kwe-SEM kukhombisa ukuthi ukudaya okusizwa yi-ultrasonic-assist akusithinti ukwakheka kwemicu ye- (nano-).
I-High-Performance Ultrasonicators ye-Dyeing Fibers kanye Nezindwangu
I-Hielscher Ultrasonics ngumlingani wakho wesikhathi eside onolwazi uma kuziwa ekusebenzeni okukhulu kokusebenza kwe-ultrasonic. Sinikezela ngephothifoliyo ephelele evela kulabhorethri nababhentshisi bezinhla eziphezulu zocwaningo, ukuhlola okwenzeka kanye nokwenza inqubo yokwenza izinqubo zokuphamba ezisetshenzisiwe zezimboni zokulungiselela ivolumu enkulu. Ngokudaya kwe-ultrasonic yezindwangu nezindwangu Hielscher unikeza izixazululo ezahlukahlukene ngokuya ngefayibha noma ngendwangu nodayi.
Uhlelo lokudaya lwe-Ultrasonic nge-2kW ultrasonicator
Hielscher Ultrasonics’ ama-processor ultrasonic processors angahambisa amnene kakhulu kumanani aphezulu kakhulu. Yakhelwe izinhlelo zokusebenza ezisindayo, ama-amplope afinyelela ku-200µm angaqhutshwa kalula ngokuqhubekayo ekusebenzeni kwe-24/7. Okokuphakama okuphezulu kakhulu, i-sonotrodes eyenziwe ngezifiso ye-ultrasonics iyatholakala. Ukuba namandla kwemishini yokusebenza kwe-Hielscher sika-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 ngaphansi komthwalo osindayo nasezindaweni ezifunwayo.
Izindwangu zezindwangu (nazo odayi bezindwangu) yizinto eziwuketshezi ezisetshenziselwa ukufaka imibala ezindwangu ezifana nezicucu, izindwangu nezindwangu ngenhloso yokufeza umbala ngokushesha kombala okufisayo. Amadayi angena endwangu bese eyiguqula ngamakhemikhali, okuholela ekufake imibala engapheli.
Imvamisa, imicu ye-acrylic idotshwa ngodayi oyisisekelo, kuyilapho i-nylon nefayibha yamaphrotheni efana noboya nesilika kusetshenzwa ngodayi, bese kusetshenziswa odayi abahlakazeka be-polyester yarn. Ukotini ungadotshwa ngezinhlobo ezahlukahlukene zedayi, kufaka phakathi udayi we-vat, nodayi wanamuhla bokusebenza abasebenza futhi abaqondile.
Amadayi ajwayelekile uhlobo lwedayi olubaluleke kunazo zonke elenziwa ngemicu ye-cellulose efana nekotini ne-viscose, kodwa futhi aya ngokuya ekuthola ukubaluleka koboya nepolyamide. Ngenxa yobubanzi obubanzi bezinhlobo zedayi ezisebenzayo, zingasetshenziselwa amasu wokudaya manifold. Idayi elisebenzayo lingahlukaniswa zibe izinhlobo ezimbili ezinkulu: udayi osashisayo (monochlorotriazine dyes) nodayi obandayo osebenzayo (dyeshlorotriazine dyes). Kusebenzisa udayi obandayo osebenzayo kuvumela ukuqhuba izinqubo zokudaya ngokushisa kwamakamelo ngoba amadayi wohlobo olubandayo ayasebenza ngokwengeziwe ngenxa yokuba khona kwama-athomu amabili e-chlorine.
Amadayi asebenzayo ayaziwa ngokungalungiswa kahle kodayi. Inkinga yokudaya udayi yenzeka ikakhulukazi lapho kudayiswa imicu ye-cellulose, lapho inani elikhulu likasawoti livame ukungezwa ukuze kuthuthukiswe ukudayiwe (futhi ngenxa yalokho kufakwe udayi).
Ukudaya kwe-Cellulose Fibre
Ekudayiseni imicu ye-cellulose enodayi osebenzayo kusetshenziswa amakhemikhali nezinsizakalo ezilandelayo:
I-Alkali (i-sodium carbonate, i-bicarbonate ne-caustic soda)
Usawoti (ikakhulukazi i-sodium chloride ne-sodium)
I-Urea ingangezelelwa kotshwala be-padding ezinhlelweni eziqhubekayo
I-Sodium silrate ingangezwa ngendlela ebandayo ye-pad-batch.
Ngezansi kunohlu lwamadayi anamagama nezinombolo zohlobo lwe-Colour Index International.
I-Alcian Blue 8GX I-Alcian Blue Ingrain Blue 74240
I-Alcian ephuzi i-GXS ISudan orange Ingrain ophuzi 1 12840
I-Alizarin UMordant ebomvu 11 58000
I-Alizarin Red S UMordant obomvu 3 58005
I-Alizarin aphuzi GG Morantant ophuzi 1 14025
I-Alizarin aphuzi R I-Mordant orange 1 14030
I-Azophloxin I-Azogeranin B Ubomvu be-Acid 1 18050
I-Bismarck brown R IVesuvine nsundu Onsundu onsundu 4 21010
Bismarck brown Y IVesuvine Phenylene nsundu Onsundu onsundu 1 21000
Luhlaza okwesibhakabhaka cresyl okwesibhakabhaka I-Cresyl eluhlaza okwesibhakabhaka BBS Udayi oyisisekelo 51010
I-Chrysoidine R I-orange eyisisekelo 1 11320
I-Chrysoidine Y I-orange eyisisekelo 2 11270
ICongo ibomvu Ubomvu oqondile 28 22120
I-Crystal violet I-violet eyisisekelo 3 42555
I-Fuchsin acid Acid violet 19 42685
I-Violet yabeZizwe I-violet eyisisekelo 1 42535
Janus luhlaza Udayi oyisisekelo 11050
I-Lissamine aphuzi ngokushesha Okuphuzi 2G Acid ophuzi 17 18965
Martius ophuzi Acid ophuzi 24 10315
I-Meldola eluhlaza okwesibhakabhaka I-Phenylene eluhlaza okwesibhakabhaka Blue eyisisekelo 6 51175
Metanil ophuzi Acid ophuzi 36 13065
I-Methyl orange I-asidi engu-52 13025
I-Methyl ibomvu Ubomvu be-Acid 2 13020
Naphthalene omnyama 12B I-Amido emnyama 10B Acid omnyama 1 20470
UNaphthol oluhlaza B Uhlaza oku-asidi 1 10020
UNaphthol ophuzi S Acid ophuzi 1 10316
I-Orange G I-Acid orange 10 16230
URose bengal Ubomvu be-Acid 94 45440
ISudan II I-solvent orange 7 12140
Titan ophuzi Direct aphuzi 9 19540
Tropaeolin O I-Sulpho orange I-asidi ye-asidi 6 14270
I-Tropaeolin OO I-asidi eyi-5 13080
Tropaeolin OOO I-Orange II I-asidi engu-7 15510
IVictoria eluhlaza okwesibhakabhaka 4R Blue eyisisekelo 8 42563
IVictoria blue B Blue oluyisisekelo 26 44045
I-Victoria blue R Blue oluyisisekelo 11 44040
I-Xylene cyanol FF I-Acid eluhlaza okwesibhakabhaka 147 42135